Nezvedu - Foring Kunze & Export Co, Ltd.
Foring Kunze & Export Co, Ltd. yakavambwa muna 2004. Kambani yedu yawana iyo ISO 9001: 2006 uye ISO 14000. Isu takaunganidza hupfumi ruzivo rwekunze kunze kweChina zvigadzirwa zvemakemikari akanaka. Zvichienderana nechirimwa chedu chine simba, isu tinokwanisa kutsigira Sulfur Nhema nevapindiri vayo kumusika wekunze.
Kambani yedu inoteerera kudzidziswa kwevashandi, vashandi vebhizinesi vane hunyanzvi mukushanda kwemhando dzakasiyana dzemakemikari zvigadzirwa ekisipoti bhizinesi. Isu tinopa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye sevhisi munguva yevatengi vedu. Iyo kambani inotarisira kutsvaga budiriro neshamwari kubva mhiri kwemakungwa uye epamba zvinoenderana nekubatana kwakanaka uye kubatsirana. Isu tinogara tichitevedzera kune dzimwe nyika kutengeserana maitiro, kuomerera kuzvibvumirano, chengeta vimbiso, mhando sevhisi, kubatsirana uye kuhwina-kuhwina bhizinesi uzivi, nebhizinesi, indasitiri, chikamu chemari chakamisa hukama hwakawanda hwekudyidzana, kuburikidza nehukama hwepedyo hwekutengeserana neChina uye musika wepasi rose. Kambani yedu inoda kutsvaga budiriro neshamwari dzinobva mhiri kwemakungwa uye epamba zvinoenderana nekubatana kwakanaka uye kubatsirana.
Foring iri nyanzvi kwekurasira Chinese akanaka makemikari zvigadzirwa. Chirimwa chedu chine nzira yepamusoro yekugadzira Sarufa Nhema B, Sarufa Nhema BR, 2,4-Dinitrochlorobenzene uye 2-Amino-4-nitrophenol. Nzvimbo yechirimwa iyi zviuru mazana manomwe emamirimita neSurfure Nhema goho rinoburitswa rinosvika zviuru gumi zvematani pagore. Iine mari inosvika makumi matatu nemazana matatu emadhora uye vanopfuura vashandi mazana matatu.
Somugumisiro wezvigadzirwa zvedu zvepamusoro uye mutengi anoshamisa, isu takawana wepasi rese wekutengesa network kusvika kuSingapore, Pakistan, Vietnam, India uye nyika zhinji muEurope.